Mika 2 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Wɔn a wɔhyɛ nkurɔfo so no nnue! (1-11)
Wɔbɛsan aboaboa Israelfo ano ama wɔayɛ baako (12, 13)
Nnipa bɛbɔ ose wɔ asaase no so (12)
2 “Wonnue! Wɔn a wɔbɔ pɔw bɔne,Wɔn a wodwen bɔne wɔ wɔn mpa so no! Ade kye a, nea wɔabɔ ho pɔw no, wɔyɛ,Efisɛ tumi wɔ wɔn nsam.+ 2 Wɔn ani bere mfuw, na wogye;+Wɔn ani bere afi nso, na wɔfa;Wosisi ɔbarima gye ne fi,+Na wosisi ɔbarima gye n’agyapade. 3 Enti nea Yehowa aka ni: ‘Merepɛ mmusu bi de aba abusua yi so,+ na morentumi nguan mfi mu.*+ Morentumi nnantew ahantan so bio,+ efisɛ ɛbɛyɛ amanehunu bere.+ 4 Saa da no, nkurɔfo de mo bebu bɛ,Na wɔabɔ mo ho bena.+ Wɔbɛka sɛ: “Wɔayɛ yɛn pasaa!+ Wɔama me man kyɛfa akodi nnipa foforo nsam; wɔagye afi me nsam!+ Wɔde yɛn nsaase ama okontomponi.” 5 Enti worennya obiara a ɔbɛtwe susuhama no mu,Akyekyɛ asaase no wɔ Yehowa asafo mu. 6 Wɔka sɛ: “Munnyae asɛm no ka!Ɛnsɛ sɛ wɔka saa nneɛma yi ho asɛm;Animguase renka yɛn!” 7 O Yakob fi, wɔka sɛ: “Yehowa honhom nni abotare bio anaa? Eyinom yɛ ne nneyɛe anaa?” Me nsɛm mfa adepa mmrɛ wɔn a wɔnantew trenee mu no anaa? 8 Nanso nnansa yi, m’ankasa me nkurɔfo asɔre sɛ ɔtamfo. Wɔn a wɔde ahotoso retwam, te sɛ wɔn a wofi ɔko reba no,Muyi ade fɛfɛɛfɛ a ɛka wɔn ntaade ho no.* 9 Mopam me man mu mmea fi wɔn afi fɛfɛɛfɛ mu;Na nneɛma akɛse a mede ahyira wɔn no, mugye fi wɔn mma nsam korakora. 10 Sɔre na kɔ, efisɛ ɛha nyɛ baabi a wɔhome. Esiane ɔbra fĩ* nti,+ ɔsɛe reba, ɔsɛe kɛse.+ 11 Sɛ ɔbarima bi di mframa ne nkontompo akyi, na odi atoro sɛ: “Mɛka nsã* ne nsã a ano yɛ den ho asɛm akyerɛ mo” a, Ɛnde, ɔno ara na ɔbɛyɛ ɔman yi sɛnkafo!*+ 12 O, Yakob, mɛboaboa mo nyinaa ano:Mɛboaboa Israelfo a aka no nyinaa ano.+ Mɛma wɔayɛ baako, te sɛ nguan a wɔwɔ nguammuw* mu,Te sɛ nguan a wɔwɔ adidibea;+Nnipa bɛbɔ ose wɔ hɔ.’+ 13 Nea obebubu de abɔ kwan no bedi wɔn anim,Wɔbɛbɔ twi afa ɔkwan no mu; wɔbɛfa pon no mu, na wɔafa mu apue.+ Wɔn hene bedi wɔn kan afa mu, Na Yehowa bedi wɔn anim.”+
^ Nt., “morentumi nyi mfi mo kɔn mu.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ade fɛfɛ a ɛbobɔ wɔn ntaade mu no.”
^ Anaa “nkɔmhyɛni!”
^ Anaa “nguannan.”